XARUN CUSUB OO CAAFIMAAD OO MUQDISHO LAGA FURAY !
Muqdisho, 11th July 2001
Waxaa shalay (10kii July 2001) magaalada Muqdisho laga furay Rugta Takhasusiga ee Carafaad oo ah Xaruun cusub oo lagu daryeelo caafimaadka dadweynaha .
Xaruuntan oo leh qalab kala duwan oo casri ah, oo aan hadda ka hor dalka la keenin oo lagu baaro cudurada , waxaana iska kaashaday dhismaheeda iyo qalabeynteeda Hay'adda Samafalka ee Zendel iyo Takhaatiir Soomaaliyeed oo takhasus u leh daaweyntooda .
Waxayna Rugtu kaalin weyn ka gali doontaa haqabtirka baahida caafimaadka dadweynaha oo iminka wixii ka horreeyay uu kharash badan kaga bixi jiray bukaanka, dibeddana u aadi jiray , sida uu sheegay Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud oo madax ka ah Xaruunta .
Sidoo kale, waxaa Xaruunta Caafimaadka ee Carafaad diyaar ku ah Takhaatiir leh takhasuskooda gaarka ah sida Dr. Cabdullahi Maxamuud Maxamed (Perfesoore) oo ku takhasusay cudurada Keliyaha iyo Kaadi-mareenka (Urologist) iyo Dr. Cabdullahi Faarax Caseyr oo ku takhasusay Caruurta (Pediatrician) iyo Takhaatiir kale oo badan oo leh takhasuskooda ee ha u deyma la'aanina .